Mpanamboatra vata fampangatsiahana ara-barotra | Nenwell-China
mamorona sanda lehibe kokoa noho ny vokatra
Nenwell dia manana karazana vokatra fampangatsiahana ara-barotra mahomby sy mitsitsy angovo mba hamenoana ny fangatahanao manokana.
Mihoatra ny 20 taona traikefa amin'ny vata fampangatsiahana napetraka. Nenwell dia manome vahaolana mahomby sy mazava tsara amin'ny mpanjifa rehetra amin'ny vata fampangatsiahana sy ny trano fandraisam-bahiny. Tanterakay foana ny fampanantenana "Hamorona lanja bebe kokoa noho ny fanirian'ny mpanjifa".
Hialoha ny Tsena
Amin'ny maha matihanina mpanamboatra vata fampangatsiahana ara-barotra, Nenwell dia manana fahitana malalaka sy saro-pady eo amin'ny indostria, manana fahaiza-manao zava-baovao lehibe eo amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana mba hanolotra vahaolana refrigeration tsara ho an'ny mpanjifa.
Vina iraisam-pirenena, Tohizo ny aingam-panahy
Mandray anjara amin'ny karazana fampitaovana hotely iraisam-pirenena sy fampirantiana vata fampangatsiahana isan-taona. Izany dia mahatonga antsika ho matihanina kokoa sy ho saro-pady amin'ny fironana tsena.
varotra mafana eran-tany!
Ny fahaiza-mividy iraisam-pirenena dia mamela an'i Nenwell hanoro sy hampiseho amin'ny mpanjifantsika ny vokatra mafana eran-tany amin'ny fotoana mety, hanome azy ireo ny fampahalalana momba ny tanana voalohany ho an'ny vata fampangatsiahana ara-barotra. Manampy ny mpanjifa handray ny fahafahana ara-barotra voalohany.
ny fiaraha-miasa dia mijoro ho vavolombelona tsy manam-petra!
motera fan axial
maotera mpankafy tsato-kazo alokaloka
tariby fantsona condenser
tongotra azo amboarina
Fividianana tsena mahomby sy fahaiza-mitady ----500 Mpamatsy niara-niasa tamin'ny vokatra sy kojakoja fampangatsiahana mihoatra ny 10.000. Anisan'izany ny kojakoja ao an-tokantrano, ny kojakoja ary ny akora.
Vahaolana feno amin'ny vata fampangatsiahana
ny hotely & supermarket!
Miaraka amin'ny fanazaran-tena sy traikefa an-taonany maro, safidy fampangatsiahana ara-barotra sy famakafakana ara-indostria marina no manome an'i Nenwell ny fifantenana haingana hanoro ny vokatra fampangatsiahana maitso maitso mety indrindra. Mba hanatsarana ny fahafahan'ny vokatra, mitsitsy asa sy toerana! Mamolavola sary sary ho an'ny mpanjifa mba hanomezana vahaolana tsara indrindra.
Mamorona hoavy mamirapiratra miaraka amin'ny
In-10 ny varotra tao anatin'ny telo taona
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, Nenwell dia nanome tolo-kevitra mahomby fampandrosoana ny tsena ho an'ny mpanjifa isan-karazany, namboly mpanjifa ny refrigeration vokatra traikefa, manampy ny mpanjifa haingana hibodo ny tsena anjara! Ny sasany amin'ireo mpanjifantsika dia nahatratra ny fitomboan'ny varotra haingana tao anatin'ny fotoana fohy tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa tamin'i Nenwell!
Amin'ny maha mpanamboatra vata fampangatsiahana OEM & ODM, dia mirehareha amin'izany izahay ary mandray izany koa mba hamerenana ny fikarakarana ny fiaraha-monina an'i Nenwell. Ny fahombiazan'ny orinasantsika dia miorina mafy amin'ny tsy fivadihana, azo ianteherana, fifampitokisana ary fifanajana eo amin'ny mpikambana rehetra ao amin'ny orinasa, ny mpanjifantsika ary ny mpiara-miasa aminay. Amin'ny alàlan'ny fanekena ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa, dia manorina fifamatorana mafy amin'ny mpanjifa sy ny mpamatsy anay izahay, mifantoka amin'ny fitomboana sy ny fahombiazana.